OPPO Reno3 နဲ့ Reno3 Pro စမတ်ဖုန်းတွေက ဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ?
Reno3 Series စမတ်ဖုန်းတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ် ဝယ်ယူကြမလဲ?
Reno3 နဲ့ Reno3 Pro စမတ်ဖုန်းတွေဟာ Reno စီးရီးရဲ့ တတိယမျိုးဆက် ထုတ်ကုန်ဖြစ်သလို 5G မော်ဒယ်မှအပ MediaTek SoC နဲ့ ထွက်ရှိထားတဲ့ အမျိုးအစားတွေပါ။
Pro မော်ဒယ်က Premium ဆန်တဲ့ဖက် သွားသလို Dual Punch-hole Display ၊ Curved-edge Screen နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။
Reno3 ကတော့ သမားရိုးကျ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သင့်တင့်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပေးစွမ်းထားတာပါ။
Reno3 & Reno3 Pro
အခုလို မတူညီတဲ့ Device နှစ်ခုမှာ Reno3 ကို နေ့တဓူဝ သုံးစွဲလိုပြီး အင်တာနက် အသုံးပြုလိုသူ ၊ တေးသီချင်းနားဆင်ရင်း အပန်းဖြေ ရုပ်ရှင်ကြည့် ၊ ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ 1,080p Display ၊ 48MP အသုံးပြုထားတဲ့ ကင်မရာ စနစ်တွေက Entertainment အပိုင်းတွက် အဆင်ပြေသလို ဓာတ်ပုံရိုက် ဝါသနာပါသူတွေအတွက် A.I လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံစေမှာပါ။
ဒီလိုပြောလို့3Pro ကို ရွေးချယ်ရမယ့် အကြောင်းပြချက်က ဘာဖြစ်သွားမလဲ? ဖုန်း ၂ လုံး အနေထားကို ယေဘူယျ အတိုင်း သုံးသပ်ကြည့်ရင် အတူတူပဲလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ Pro အတွက် အားဖြည့်ထားတာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။
Reno33Pro
Screen Size 6.4” (84% Screen-to-body Ratio) 6.4” (87.4% Screen-to-body Ratio)
Resolution 1,080 x 2,400 (441ppi) 1,080 x 2,400
Protection – Gorilla Glass 5
ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ 6.4” Screen ၊ 1,080p သုံးတာချင်းအတူတူတောင် အလင်းအား (Brightness – nits) ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Display သုံးထားတာမျိုးပါ။
OPPO အဆိုရ 500nits Typical နဲ့ 1,200nits Max ရှိမယ်သိထားရလို့ Reno3 Series ကိုမှ Flagship ဆန်ဆန် သုံးစွဲလိုသူတွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါ Brightness ဟာ အလင်းများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလို Camera Performance ကိုမှ နောက်ထပ်တဆင့် သုံးလိုသူတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာပါ။
Primary Sensor ဟာ 64MP ဖြစ်သွားတဲ့အပြင် Aperture ကလည်း 1.7 သုံးထားတဲ့အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်နဲ့ ညဖက် ရိုက်ကူးတဲ့အခါမျိုးမှာ Pro မော်ဒယ်က ကောင်းမွန်တဲ့ Performance ကို ပေးစွမ်းမှာပါ။
စမတ်ဖုန်း ၂ မျိုးမှာ 48MP နဲ့ 64MP Primary Lens သုံးထားလင့်ကစား တူညီတဲ့ Function ပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုက Ultra-clear 108MP နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Mode ပါဝင်ထားတာပါ။
ဒါကြောင့် Lighting ကောင်းတဲ့ အခြေနေမျိုးမှာ ပိုပြီး Detail ကျ လှပတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ဖမ်းယူနိုင်သလို တူညီတဲ့ 13MP Telephoto Lens အရည်သွေးကြောင့်လည်း Optic Zoom ကို 5x နဲ့ Digital Zoom ကို 20x စသဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
ရေပန်းစားနေတဲ့ Night Mode Photography ပိုင်းအတွက် A.I နဲ့ အားဖြည့်ထားပြီး Imaging Time နဲ့ Multi-frame A.I Noise Reduction လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Night Mode Shot တွေ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ ရရှိစေမှာပါ။
သို့အတူ 2MP Macro Lens နဲ့ 3cm Macro Shot ရိုက်ကူးနိုင်သလို အဓိက ကွာခြားသွားတာ Primary Lens ပါ။
Pro မော်ဒယ်ရဲ့ 64MP Lens ဟာ အရွယ်စား ပိုကြီးသလို Aperture f/1.7 ပဲရှိတဲ့အတွက် သီအိုရီအရ အလင်းရောင် အားနည်းချိန်နဲ့ ပိုမိုအနုစိပ်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Primary 48MP f/1.8 (26mm) 64MP f/1.7 9(27mm)
Telephoto 13MP f/2.4 (52mm) 2x Optic 13MP f/2.4 (52mm) 2x Optic
Ultra-wide 8MP f/2.2 (13mm) 8MP f/2.2 (13mm)
Macro (Depth) 2MP f/2.4 2MP f/2.4
Selfie 44MP f/2.4 (26mm) 44MP f/2.4 (26mm)
Selfie Photography အပိုင်းမှာတော့ သိသာထင်ရှားစွာနဲ့ Pro မှာ Dual Selfie Lens ပါဝင်တာ သတိထားမိမှာပါ။
44MP Primary Lens သုံးထားတာချင်း အတူတူဖြစ်ပေမယ့် Pro မော်ဒယ် လုပ်ဆောင်ချက် အပိုဆောင်း ပါဝင်သွားတာက Dual Lens Bokeh လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
နောက်တချက် ပြောစရာက MediaTek SoC ပါ။ Helio P90 နဲ့ P95 တို့ဟာ Mid-range Chipset တွေဖြစ်သလို Entertainment နဲ့ Gaming Performance မှာ တမျိုးတဖုံး စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ Chip တွေလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Multi-tasking အပိုင်းနဲ့ Loading အပိုင်းမှာ စွမ်းဆောင်အပိုင်းကို အဓိကထား အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Helio P95 ပါဝင်တဲ့ Pro မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သာမန်အသုံးပြုဖို့နဲ့ Entertainment အပိုင်း ရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုရင် Reno3 ကို စဥ်းစားသင့်ပါတယ်။
Helio P90 Helio P95 Snapdragon 712
CPU 2×2.2GHz A75 & 6×2.0 A55 2×2.3GHz A75 & 6×1.7GHz A55
Storage 128GB/256GB (Reno3 Pro) UFS 2.1 128GB Storage UFS 2.1
GeekBench 4.0 (Single) 1,994 1,969 1,858
GeekBench 4.0 (Multi) 6,162 6,617 5,975
ဒါက စမတ်ဖုန်းနှစ်မျိုးကို ယေယူယျသုံးသပ်တာဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုသူတွေအတွက် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်မလဲ အကြံပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
P90 နဲ့ P95 နောက်မှာ Kirin 960 နဲ့ 970 SoC တို့ ကပ်လျက်လိုက်နေသလို Snapdragon 712 ၊ 675 တို့ထက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံးမှာ 4,025 mAh (Milliampere per Hour) Capacity ပါဝင်ပါတယ်။ Reno3 မှာ VOOC Flash Charge 3.0 ပါဝင်ထားလို့ 50% ကို မိနစ် ၃၀ အတွင်း 30W Speed နဲ့ အားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
Pro မော်ဒယ်မှာတော့ VOOC 4.0 နည်းပညာ အသုံးပြုထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ High-current Charging Time ကြောင့် 50% ကို မိနစ် ၂၀ အတွင်း 30W Speed နဲ့ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ VOOC နည်းပညာနှစ်မျိုးစလုံးမှာ TUV Rheinland Safe Fast-charging System Certificate ရှိပြီးသား ဖြစ်တာမို့ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း ၂ မျိုးစလုံးမှာ AMOLED Display သုံးထားတဲ့အတိုင်း Security Feature အတွက် Optical Under-display Fingerprint Reader တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
OPPO အဆိုရ အဆိုပါ System ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး 0.34s အတွင်း စမတ်ဖုန်းကို Unlock လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Entertainment ပိုင်းအတွက် ဖြည့်စွက်ချက် တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်လာတာ Dolby Atmos စနစ်ပါ။
သို့အတူ ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံးမှာ Stereo Speaker အသံထွက် စနစ်ပါရှိပြီး Hi-Res Audio ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အသံ အရည်သွေးကို ရရှိစေမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ တကွက်သာသွားတာ Pro မော်ဒယ်ဟာ Netflix Support ရရှိထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်း မျက်နှာပြင်မှာ 1,080p အရည်သွေးရှိ HD ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဦးမှာပါ။
အနှစ်ချုပ် အနေနဲ့ ရောင်းချထားတဲ့ တန်ဖိုး (Reno3 မြန်မာငွေ ၄၄၉,၉၀၀ ကျပ် ၊3Pro မြန်မာငွေ ၅၉၉,၉၀၀ ကျပ်) ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရရင် Mid-range ဖုန်းတစ်လုံး အနေနဲ့ ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်တဲ့ Device တွေပါ။
Reno3 ကတော့ ၅ သိန်း ဝန်းကျင်မှာ စွယ်စုံရ ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ အသုံးချနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။
စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်းမှာ သာမန် အသုံးပြုဖို့ ၊ အင်တာနက် သုံးရင် ဂိမ်းကစားတာမျိုးနဲ့ နှစ်သက်ရာ စေခိုင်းနိုင်ဖို့ အသုံးချနိုင်တဲ့အတွက် တမျိုးတဖုံ စွမ်းဆောင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။
Pro မော်ဒယ်ကတော့ SoC ပိုမြင့်သလို အသုံးပြုထားတဲ့ Super AMOLED Panel ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ခံစားနိုင်တယ်၊ 64MP ပါဝင်တဲ့ Quad Camera စနစ်က Pro ဆန်ဆန် ရိုက်ချက်တွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့်အပြင် ပိုကောင်းတဲ့ Performer စမတ်ဖုန်း အနေနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တဲ့ သဘောက ဘက်စုံသုံး ဖုန်းတလုံး အနေနဲ့ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Reno3 က သင့်တော်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Entertainment ပိုင်းအသားပေးပြီး ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူး Edit လုပ်ရတာ ဝါသနာပါရင် Pro ကို စဥ်းစားသင့်ပါတယ်လို့ ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
OPPO Reno3 ၊3Pro Homepage
Ampere မိတ်မဆက်ခင် High-end Turing ကတ် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ Nvidia
Intel 11th Gen Processors မှာ ပါဝင်လာမယ့် အားသာချက်များ